Nezve AngelBiss - AngelBiss Healthcare Inc.
Mari yezvikamu AngelBiss Healthcare Inc. yekutanga chete inotarisana nekuchinja-chinja kweokisijeni concentrator uye inogona kudzora mwero wekuchinja mukati me0.1%, inonyanya kuita mukusimudzira, kushambadzira nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamunda weOxygen Therapy, Surgery Therapy, Asthma Therapy uye Diagnostic Therapy. Iine yayo pachezvayo mabhenefiti uye ine simba reinjiniya kugona, AngelBiss yakapa yakawanda yepamusoro-soro mhinduro kune vatengi pasirese.
AngelBiss mauniti ese zvigadzirwa zvine akanakisa mhando zviyero uye mashandiro akanaka. Zvigadzirwa izvi zvinodhura uye zvine hushamwari nezvezvakatipoteredza, zvirinyore kuchengetedza, izvo zvakaratidza kuvimbika kwavo mumakumi ezviuru emasevhisi pasi rese.
Kuti udzidze zvakawanda nezveAngelBiss zvigadzirwa uye nemasevhisi ekushandisa, tinya pane zvinotevera:
Sarudza AngelBiss, Zvino wedzera kutendeka kwehutano hwedu